UYilmaz weTurkey uthi bebezolanda amava kwi-Euro - Impempe
UYilmaz weTurkey uthi bebezolanda amava kwi-Euro
UBurak Yilmaz weTurkey
Umqeqeshi weTurkey, uSenol Gunes uyavuma ukuthi iqembu lakhe ‘libhacazile’ ngemuva kokuhlulwa kuyo yomithathu imidlalo yamaqoqo kwi-Euro 2020.
ITurkey yaqala yahlulwa yi-Italy neWales emidlalweni emibili yokuqala, kwase kuthi ngeSonto yaliwasha ijezi kulandela ukushaywa yiSwitzerland ngo 3-1.
Lokhu kwenze iTurkey yaqeda ingazange iqoqe nelokuyobika ekhaya iphuzu kwi-Euro 2020. Ekhuluma ngemuva komdlalo, uGunes uthe ukholwa ukuthi ukuhlulwa kwabo yi-Italy emdlalweni wokuqala kwabakhinyabeza.
Uthi ezakhe zabe sezihluleka ukuvuka lapho zizithintithe, zibuyele emqhudelwaneni. Lo mqeqeshi uthi yize kubhimbe uhlelo kul0 mqhudelwano, usalithemba iqembu lakhe ukuthi lingakwazi ukuphinde lidlale kahle kwezinye izindebe ezilandelayo.
Funda la: Ihlome ngezihlabani zodwa i-Italy kaMancini: https://bit.ly/3xB7XQr
“Siyazi ukuthi sibhacazile. Umdlalo wokuqala wabahlukumeza kakhulu abadlali bami,” kusho uGunes. “Kodwa laba badlali basazoyidlalela iTurkey iminyaka eminingi ezayo futhi basazophumelela njengaphambilini.”
Isikwati saseTurkey besibophele abadlali abasebancane kunazo zonke kwi-Euro yakulo nyaka. Isihlabani se-AC Milan, uHakan Calhanoglu uhambe emazwini omqeqeshi wakhe.
“I-Euro 2020 isiphoxe kakhulu, kufanele sifunde emaphutheni ethu kodwa ngeke sibhekise sizenyeze,” usho kanje. “Iqembu lethu lidlala ngabafana abancane futhi lizoba ngcono ngokuhamba kwesikhathi.“
Funda la: Seziluliwe izinkontileka ‘zamakhehla’ kwiChiefs
Ngaphambi kokuqala kwe-Euro 2020, bekubhekwe lukhulu kumgadli weTurkey, uBurak Yilmaz osize iLille yathatha isicoco seligi eFrance. Kodwa uhluleke wancama ukushayela iTurkey amagoli njengoba ize yaphuma engashayanga nelilodwa nje.
Uthi: “Asikwazanga ukumelana nokudlala kule ndebe, kufanele ngikuvume lokho. Sikwazile ukungena kuma-Euros, futhi sisenza kahle kakhulu emidlalweni yokuhlungela iNdebe yoMhlaba.
“Kodwa ngiyabona ukuthi kuningi okusafanele sikufunde ngokudlala emiqhudelwaneni emikhulu. Leso yisifundo okufanele sisifunde ngokushesha.”
Ezakamuva, Ibhola lomhlabaFrance. Euro 2020, Italy, Turkey
Previous Previous post: Ihlome ngezihlabani zodwa i-Italy kaMancini
Next Next post: Kusize izinsephe zamaProteas iWest Indies isho ukuwaqeda